I-Fuzhou University Modern Jane Ou's Home Sanfang Qixiang/Powerlong City Plaza/Jiangbin Park amafasitela epanoramic asuka phansi kuya ophahleni kanye negumbi lelanga lokugada ezokuphepha amahora angama-24
Fuzhou, Fujian, i-China
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-乐语
Nawe uma uthanda ukuhamba ngicela uze la kwami umuzi wonke ungowakho ukuze uhlale njengowakho.
1. Indawo yokulala iyashintshwa kusivakashi ngasinye. Khetha izinto zokugeza zemvelo, o-anti abaqeqeshiwe abahlanzayo, bese ubulala amagciwane ilineni ngayinye ngayinye, ukuze uphile ngokunethezeka nokuhlanzekile, futhi uhlale uphephile futhi uvikelekile.
2. Ikhishi lifakelwe amabhodwe nezitsha (i-wok, i-tableware,) yokupheka izitsha ozithandayo.
3. Indlu yangasese ezimele inamahora angu-24 amanzi ashisayo, ahlanzekile futhi anethezekile.
4. Osofa abanezihlalo ezimbili egumbini lokuhlala, ongasetshenziswa ukwenza itiye ukuzilibazisa, kanye ne-TV ehlakaniphile enesikrini esikhulu isekela ukuboniswa kwesikrini.
5. Umphakathi lapho ifulethi lethu likhona unokuvikeleka okuphelele, indawo ethulile phakathi komsindo, kanye nomphakathi ophelele ophilayo wemvelo.
PS: Kunezitofu ezizimele kanye nama-hoods endlini, kodwa ngenxa yokuthi iyifulethi elilodwa eliphansi, akunconywa ukupheka okuningi nokunye ukudla okunambitheka kakhulu ekamelweni. Sifakwe umpheki we-induction kanye nepani elifanele ukupheka ama-noodle nokudla okulula (sizokhokhisa imali yokusebenzisa kanye nje engu-30 yuan uma udinga ukukusebenzisa) Siphinde silungise isethi yezitsha zetafula zabantu abangu-2. Kodwa sicela uqiniseke ukuthi uyayihlanza ngemva kokuyisebenzisa. Uma kungenjalo, sizokhokhisa ama-yuan angama-35 ngokuhlanza.
Ifulethi elihlotshiswe kahle lesitayela sehhotela, igumbi lokulala elilodwa negumbi lokuhlala elilodwa, elinendawo yokugezela yangasese ezimele, isethi ephelele yezindlu, indawo yomuntu siqu yangasese. Amafasitela angamamitha angu-3 ukusuka phansi kuya ophahleni angabuka ubuhle bomphakathi wonke. Ziningi izindawo ezizungezile ezikhangayo, njenge-Xichan Temple, i-Fuda Creative Park, i-Powerlong City Plaza, amapaki aseduze no-Jiangbin Avenue, i-Zhongfang Wanbao City Underground Food City, njll. Indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu, ihlanzekile, ihlanzekile futhi icocekile. Ikhodi yamahora angama-24 yokungena okuzimele. Ukwakha ama-patrol ezokuphepha amahora angama-24 ngosuku. Ifakwe indawo yokupaka engaphansi komhlaba (ama-yuan ama-5 ngehora). Sekela ukuqashwa kwanyanga zonke, intengo ivuma!
Le ndlu itholakala esifundeni saseGulou, okuyisifunda esiwumgogodla weFuzhou, futhi akukho muntu. Indawo iphakathi kwe-Baolong City Plaza ne-Dongjiekou Sanfang Qixiang. Ibanga phakathi kwezinhlangothi zombili lingamakhilomitha angu-2.5. Indawo ephelele kakhulu.
Ukuze siqinisekise ubumfihlo bamakhasimende ethu, ngeke sivele ohlwini. Ukhiye womnyango uwukhiye wekhodi wokungena ozimele. Uma udinga usizo lwethu, ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Fuzhou namaphethelo